GURYAHA HOLLAND, FAA IIDOOYINKA IYO SIFOOYINKA - DHISMAYAASHA
Tiknoolajiyada casriga ah: Fanaanada Holland - faa'iido iyo faa'iido daro, muuqaalada, sawirro
Tiknoolajiyada naqshadda farsamada ee Holland Maanta waxaa loo yaqaan dhammaan aduunka oo dhan. Isticmaalka qaababkaasi waxay kuu oggolaanayaan inaad koraan dalagyo badan oo qiimo jaban.
Thanks to isticmaalka tiknoolajiyada "mashruuc lagu xiro", qadarka cayayaanka iyo fungicides si aad u yar ayaa loo dhimay, taas oo waxay hubisaa in la abuuro badeeco jawi bey'adeed oo saaxiibtinimo leh.
Noocyada lagu koriyo ee Holland
Hase yeeshee, khudradda cagaaran ee xaaladaha dabiiciga ah ee abuuray waxay muddo dheer noqdeen kuwo caadi ah, si kastaba ha ahaatee lagu koriyo ee Holland wuxuu u adeegsaday barta bilawga ah ee xooggan oo xooggan oo ku yaal aaggan, sababtoo ah joogitaanka faa'iidooyin badan.
Sidaa darteed, lagu koriyo Holland Inta badan waxaa loo isticmaalaa sida goobaha warshadahaSidaa darteed, adeegsigooda qaybta gaarka loo leeyahay maaha mid ku haboon.
Qaabka biraha ee qiyaasta ah ee la xisaabiyey wuxuu bixiyaa kalsooni iyo adkeysiga naqshadeynta.
Inta badan, dhismooyinka waaweyn ee aqalka dhirta lagu koriyo ayaa leh dhibaatooyin gaar ah oo la xiriira kala soocida biyaha, taas oo la sameeyay sababtoo ah roobab.
Si loola dagaallamo dhibaatadan ayaa la horumariyey aluminium. Muuqaal qalabkan waa joogitaanka qalabka sanduuqa khaaska ah, iyo sidoo kale dhismaha daadi biyoodka.
Iyada oo ay dhererkiisu badan yahay (60 m), qaabdhismeedka aqalka dhirta lagu koriyo ayaa laga ilaaliyaa abuurista daroogada, taas oo si xun u saameeysa koritaanka dhirta. Si taxaddar leh uga fikiray naqshadeynta waxaa loo habeeyay hab sidaas ah xitaa roobab culus biyuhu ma geli karaan bannaan, daadinta galaaska.
Faa'iidooyinka beeraha Holland ee:
xajmiga dhismaha waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la adeegsanayo barnaamijka CASTA ee khaaska ah oo caan ku ah adduunka oo dhan, taas oo suurtogal u ah helitaanka tilmaamo sax ah oo xisaabin ah;
Habka xisaabinta loo isticmaalay waxay u maleyneysaa in qadarka iftiinka ee qolka ku yaal ay ku xiran tahay dhumucda derbiyada hoose. Saameynta arrimahan, sida ku xusan khubarada, waa 1% ilaa 1%;
Guryaha aqalka dhirta lagu qalajiyo waxaa lagu qalabeeyaa kaneecada udubdhexaadka, kaas oo ka ilaaliya dhismaha dabaylaha xooggan.
Saldhigga qaabka dhismaha ee Holland waxaa laga samayn karaa alaab bir ah iyo aluminium.
Tayada qalabka birta waxay ku xiran tahay wax badan oo ka mid ah dhumucda birta sida xisaabinta xisaabinta saxda ah ee saamiga birta iyo biraha iftiinka soo galaya.
Caawimaad: Marka loo eego Fiisooyinka Dutch, tayada iyo mugga dalagga waxaa ugu wacan joogitaanka iftiinka wax ku oolka ah ee aqalka dhirta lagu koriyo, halka qadarka iftiinka iyo dhirta dhirta ay yihiin 1: 1.
Dhismaha aluminium waxaa loo isticmaalaa dhismaha lagu koriyo sida Venlo. Isbedelkan waxaa si toos ah loogu yeeri karaa nidaamka ugu casrigaSababtoo ah joogitaanka dhowr arrimood oo hoosta ka ah:
Nidaamka ayaa loo adeegsan jiray sannado badan, taas oo muujinaysa in waayo-aragnimada muhiimka ah laga helay jihada this;
Maalgashado cusub oo muhiim ah ayaa si joogto ah loogu sameeyaa horumarinta cusub;
shahaadada EU-da sababtoo ah sharciyo adag.
Hoos ka fiiri: warshadaha warshadaha ee Holland Sawirro
Daboolka kuleylka Nederlandka
Sida dusha sare ee xaruntan, muraayad gaar ah ayaa loo isticmaalaa. Faa'iidada qalabka noocan oo kale ah waa in wax-soosaarkooda ay adeegsadaan tiknoolajiyadda ugu dambeysa ee qaabaynta sheyga.
Farsamadani waxay ku siinaysaa muraayadda guryaha soo socda:
awoodda ay u gudubto in ka badan 90% iftiinka, taas oo kordhinaysa mugga dalagga;
joogitaanka dulqaadka dhinacyada oo dhan (+/- 1 mm) waxay sahlaysaa qaadista ku haboon ee galaaska;
Maaddadu waa mid joogto ah waxayna leedahay heer aad u sareysa;
Dusha sare waxay leedahay muraayad isku mid ah, taas oo siinaysa diidmada dheeraadka ah ee barafka iyo dabaylaha.
Ogsoonow: sariirta waa in ay sameeyaan koox ka mid ah xirfadlayaal khibrad leh oo haysta qalab gaar ah oo loogu talagalay inay qabtaan shaqo ku saabsan qaadista iyo rakibidda walxaha qaabdhismeedka.
Iyadoo loo eegayo dhererka sare ee dhismaha (6 m) iyo joogitaanka goobaha hawo-qaadashada, aqalka dhirta Nederlandka ayaa leh hawo-tayo sare leh.
Xitaa iyada oo aan la dhammaystirin furitaanka taraafikada, qaab dhismeedka dhererka ayaa si fiican uga fiican dhismaha hoose oo leh si buuxda u furan.
Guryaha hoose, heerka dhaqdhaqaaqa hawadu hoos u dhacdo sababtoo ah dhirta, taas oo keenaysa in ay sii xumaato kulaylka. Guryaha dhaadheer, dhirta ayaa yaraynaya hawada hawada.
Nidaamka waraabka ayaa si buuxda u shaqeeya. Dhammaan qalabka waxaa lagu soo ururiyaa goobta wax soo saarka, ka dibna waxaa la geeyaa goobta dhismaha oo ah alaab dhamaystiran. Nidaamka waxaa gacanta ku haya kumbiyuutartaas oo kuu ogolaanaysa inaad abuurto microclimate wanaagsan ee dalagyada beeraha.
Nidaamkan waxaa loo adeegsadaa hal sawir oo kali ah, waana muraayado gaar ah oo wareegsan oo furan oo la xirayo iyadoo la adeegsanayo hababka xakamaynta.
Caqabadaha noocan oo kale ah ayaa lagu rakibay wareegga wareegga dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo, kaas oo u oggolaanaya Isku habee qadarka iftiinka guriga. Sidoo kale, shaashadu waxay qabataa hawlaha kuleyliyaha kuleyliyaha.
Qalabka nalalka waxaa lagu rakibay si waafaqsan xisaabinta taxadar leh. Nalalka ugu waxtar badan Fittings waxaa lagu rakibay xaqiiqada dhabta ah. Nidaamka waxaa lagu qalabeeyaa 750 W lambar, kuwaas oo la gooyey iyo dibedda marxaladaha.
Tiknoolajiyada Hollandka iyo isticmaalka qalab casri ah oo qalab casri ah ayaa u oggolaanaya in lagu koriyo oo lagu ciyaaro Hollandka hal boos oo hoggaanka waxsoosaarka beeraha aduunka.